‘समाजका लागि गरेको कामले दिने आत्मसन्तुष्टी पैसाको बिटाले दिन सक्दैन’ : ज्ञानेन्द्रराज पाण्डे – Saurahaonline.com
‘समाजका लागि गरेको कामले दिने आत्मसन्तुष्टी पैसाको बिटाले दिन सक्दैन’ : ज्ञानेन्द्रराज पाण्डे
सौराहा अनलाइन | २०७६, २६ आश्विन आईतवार
चितवन : रत्ननगर १० शुभप्रभात टोल निवासी ज्ञानेन्द्रराज पाण्डे सामाजिक काम भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन । सामान्य घरपरिवारका पाण्डेले अरुको दुख देख्नै सक्दैनन् । आर्थिक अबस्था कमजोर भएर उपचार गर्न नपाएका,विहान बेलुका खान नपाएका समुदायलाई सहयोग जुटाउछन ।
आफुले दिन सक्ने उनकै आर्थिक हैसियत छैन तर उनमा सहयोग जुटाउन सक्ने शक्ति छ । पैसा कमाएर सम्पन्न हुन्छु भन्ने सोच उनको मनमा कहिल्यै आएन । राजनीतिक रुपमा कम्युनिष्ट विचार राख्ने पाण्डे पैसा कमाउन छाडेर सामाजिक क्षेत्रमा लागे । कम्युनिष्ट विचार बोक्ने पाण्डेलाई पार्टीको राजनीति प्रति त्यति चासो छैन ।
उनले आफ्नो घरमा राष्ट्रिय झण्डा राखेर राष्ट्रप्रति प्रेम व्यक्त गरेका छन । गरिव,विपन्न,असहाय र अशक्तहरुलाई सहयोग गर्ने,समाजमा आइपर्ने समस्यालाई गहिरो अध्ययन गरी समाधान निकाल्ने उनमा अभूतपूर्ण क्षमता छ । विद्यार्थी जीवन देखिनै समाजिक क्षेत्रमा सक्रियाशिल पाण्डे विगत १३ बर्ष देखि सरसफाईको क्षेत्रमा क्रियाशित छन । घर,आगन,टोल,गाउँ,समाज,वडा,नगर हुदै देशभरीनै सरसफाईको अभियान चलाउन उनले सुरु गरेका छन । उनकै टोल शुभप्रभात टोल विकास संस्थाबाट सुरु गरेको सरसफाईको काम अहिले अभियानको रुपमा अगाडि बढेको छ ।
२०६३ साल पुसमा उनी शुभप्रभात टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष बने । अध्यक्ष बनेपछि उनको प्रमुख एजेण्डा नै सरसफाई बन्यो । १३ बर्ष देखि लगातार उनले टोलमा एक्लै फोहोर टिप्दै हिड्छन । पाण्डेले गरेको काम देखेपछि गाउँहरु समेत उनको सिको गर्न थालेका छन । सो टोल विकास संस्थामा अहिले हप्ताको एक पटक सरसफाई कार्यक्रम चल्छ । टोल सरसफाईमा नमुना भएको छ । पाण्डेकै कारण वडा नं १० वातावरणमैत्री वडा भएको छ । सरसफाईमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पाण्डे नगरपालिकाबाट पटक पटक सम्मानित भएका छन ।
उनीमात्र होइन उनले नेतृत्व गरेको टोल विकास संस्थालाई समेत नगरपालिकाले ३० हजार नगद सहित पुरस्कृत समेत गरेको छ । सरसफाईमा उत्कष्ट भएर टोल विकास संस्थालाई चिनाउन सफल भएको भन्दै पाण्डेलाई गाउँलेले समेत नागरिक अभिनन्दन गरेका छन । अन्य डेढदर्जन सामाजिक संघसंस्थाले उनलाई सम्मान गरेका छन । सरकारले सन २०२० लाख पर्यटन बर्षको रुपमा मनाउदै छ । सरसफाई नभए पर्यटन बर्ष सफल हुदैन भनेर उनले २०२० सफल पारौं,सरसफाई अभियान देशव्यापी बनाउ भन्ने एकल नारा तय गरेका छन ।
जिल्लाका हरेक संघसंस्थाले गर्ने सरससफाई कार्यक्रममा पाण्डे पुग्छन । ति कार्यक्रममा भ्रमण बर्ष र सरसफाईको कुरालाई जोडेर उनले नागरिकलाई सरसफाईमा जागरुक बनाउछन । पैसाले नाम कमाउन सकिदैन पाण्डे भन्छन निस्वार्थ भएर सामाजिक काम गर्न सकियो भने पैसाले दिन नसकेको सन्तुष्टी सामाजिक कामले दिन्छ ।
उनले जिल्लामा रहेका मृर्गौला रोगी,क्यान्सर रोगीहरुलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने गरेका छन । रंगशाला निर्माण स्थलमा पुगेर श्रमदान गरे । आफ्नै वडामा खोप केन्द्र बनाउदा पनि उनले पैसा नलिई ४ दिन सम्म काम गरे । यि र यस्तै काम गरेकै कारण पाण्डे अहिले जिल्लामा चिनिएका छन । सामाजिक कामका समाचारहरुमा उनको फोटो छापिने गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता नहुँदा गाडीको इन्जिनमा समस्या २०७६, १२ माघ आईतवार
मौसमको अवस्था, कहाँ कस्तो रहने छ ? २०७६, १२ माघ आईतवार
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पश्चिम बंगालतिर, उच्च नेतालाई पनि भेट्ने २०७६, १२ माघ आईतवार
बिमा कम्पनीले अटेर गर्दा हजारौं युवा विदेशमा प्रभावित २०७६, १२ माघ आईतवार
सहुलियत दरको ऋणबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित २०७६, १२ माघ आईतवार
इन्टरनेटमा ठगी ! निरीह उपभोक्ता, रमिते नियामक २०७६, १२ माघ आईतवार
पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता नहुँदा गाडीको इन्जिनमा समस्या
-सुदर्शन आचार्य, चितवन : नेपालको मुख्य आयस्रोत मानिएको भए तापनि यातायात क्षेत्रमा भने खासै सुधार ल्याउन सकिएको.....
मौसमको अवस्था, कहाँ कस्तो रहने छ ?
तपाईको आज आईतबार यस्तो छ भाग्य ?
भरिभराउ सौराहाको सेकुवा कर्नर
इच्छाकामना घुमौ (फोटो फिचर)
खैरहनी नगरपालिकाको नगर सभा, विभिन्न ८ वटा निर्णय पारित
पूर्व-बाललडाकु भन्छन्‌ : ‘अलपत्र पर्‍यौं, कुल्ली काम भए पनि देऊ’
उदार पश्चिमा समाज, यसकारण बढ्दैछ विवाहपूर्वको ‘यौनसम्बन्ध’